ကျောက်ကပ်အစားထိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး လူနာရှင်များမှ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မးခွန်းများ
Apollo institute of Transplant – The Centre for Liver Disease & Transplantation
ဂရုဏာ ရှ့ထား ကုသပေးတာ အပိုလိုပါ။
 ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘ၀အတွက် Apollo နှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ကြစို့
အပိုလိုဆေးရုံ မန်မာပြည် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး
WeCare Health Care Services Co.,Ltd.
အမှတ် ၇၃၊မြေညီထပ်(က)၊ အုန်းပင်လမ်း (အထက်)၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
Phone Hot Line: 09 730 43351 , 09 970 716 074, 09 5373256
အမှတ် ၂၅၊ ၈၂ လမ်း၊ ဘုရားကြီးတောင်ဘက်၊ ရစင်ကွေ့အနီး၊ မန္တလေးမြို့။
Phone: 09 5120 118, 09 977 339 477
About Apollo Hospitals (အပိုလိုဆေးရုံများအကြောင်း)
အပိုလိုဆေးရုံသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် အနီးဝန်းကျင်နိုင်ငံများအတွက် ကုတင်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ခန့်၊ဆးရုံပေါင်း ၆၆ ခုဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ကျန်းမာရေးစာင့်ရှောက်မှုပေးနေသော အာရှ၏ အကြီးမားဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အတွေးအခေါ်၊ အတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် သုတေသနများပေါ် အခြေခံပြီး လူနာများစွာ၏ ရာဂါဝေဒနာများအား ကုသပေးလျက်ရှိသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် Apollo ဆေးရုံသည်ထွးကြင်နာသော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကုသမှုအောင်မြင်နှုန်းမြင့်မားခြင်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်သော နည်းပညာများကိုပေါင်းစပ်ပြီး ၁၂၁နိုင်ငံမှ လူနာ ၅၅ သန်းကို ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Apollo ဆေးရုံကြီးတွင်ကျာက်ကပ်အစားထိုးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၊ကျာက်ကပ်ရောဂါအထူးကု သမားတော်ကြီးများ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းနှင့်ဆိုင်သောရာဂါများအတွက် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီးခတ်မီစက်ကိရိယာများ၊ နည်းပညာများဖြင့် လူ့အသက်များစွာကို ကယ်တင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင်ခတ်မီသောရာဂါရှာဖွေနည်းစနစ်များ၊ မခွဲစိတ်မီ လူနာကို ခွဲစိတ်ကုသပုံများနှင့် ကျာက်ကပ်ဆေးခြင်းအကြောင်းကို အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးခြင်း၊ နာက်ဆုံးပေါ်စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများပေးခြင်း၊ ရာဂါပိုးမွှားများကူးစက်ခံရမှုလျာ့နည်းစေရန် ခွဲစိတ်မှုခံယူထားသော လူနာအတွက် သီးသန့်အခန်းစီစဉ်ပေးထားခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆာင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာ လူနာနှင့် လူနာမိသားစုဝင်တွေ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမးခွန်းများကို ဗဟုသုတအဖြစ် ၀မျှပေးချင်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ ?
ကျန်းမာတဲ့ကျောက်ကပ်တွေဟာ အညစ်အကြေးများ၊ ပိုလျှံသောအရည်များ၊ သတ္တုဓာတ်များ (minerals) များကို ခန္ဓာကိုယ်မှ ဖယ်ရှားပေးပြီး သွးကို သန့်စင်စေပါတယ်။ ထို့ပြင် အရိုးအဆစ်တွေသန်မာဖို့အတွက် လိုအပ်သော calcium (ကယ်လဆီယမ်) စုပ်ယူမှု အားကောင်းစေရန် ကူညီပေးပါတယ်။ သို့သော်ကျာက်ကပ်ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် အညစ်အကြေးများ စုပုံလာခြင်း၊သွးဖိအားတက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်ကျာက်ကပ်မှ မဖယ်ရှားနိုင်သောအရည်များကြောင့် ဖာလာခြင်း၊ လုံလောက်သောသွးနီဥဆဲလ်များ မထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းများ ခံစားလာရနိုင်သည်။ ဒီအချိန်မှာတော့ သင်ရဲ့ကျောက်ကပ်အတွက် ဆးကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ် လာပါပြီ။
ကျောက်ကပ်အစားထိုးခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ?
ကျောက်ကပ်အစားထိုးတယ်ဆိုတာ ကျန်းမာသောလူတစ်ယောက်ထံမှ ကျန်းမာသောကျောက်ကပ်တစ်ခုကို ထုတ်ယူပြီး လိုအပ်သောလူနာတွင် အစားထိုးကုသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအစားထိုးလိုက်တဲ့ကျောက်ကပ်ဟာ လူနာရဲ့အလုပ်မလုပ်သောကျာက်ကပ်၂ခုအစား အလုပ်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိမှာကျာက်ကပ်အစားထိုးခြင်း (၂) မျိုးရှိပါတယ် : (၁) (living donor) ကျန်းမာသောအလှူရှင်ထံမှ ကျန်းမာသောကျောက်ကပ်ကို ယူပြီးအစားထိုးကုသခြင်း၊(၂) Deceased Donor သေဆုံးသူထံမှသဆုံးပြီးချက်ချင်း ကျာက်ကပ်ထုတ်ယူပြီး အစားထိုးကုသခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ် အစားထိုးခြင်းကို မည်သူတွေက ပိုလိုအပ်သနည်း။
ကျောက်ကပ်ရောဂါကို ရာဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဆင့်(၅)ဆင့်သတ်မှတ်ပြီး ပာလို့ရနိုင်ပါတယ်။ အဆင့် (၁) တွင်ကျာက်ကပ် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အဆင့် (၄) တွင် ၁၅ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၀ရာခိုင်နှုန်း အထိ င့် အဆင့် (၅)တွင် ကျာက်ကပ်သည် ၁၅ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ ကျာက်ကပ်အလုပ်လုပ်နိုင်တော့သည်။ Chronic Kidney disease (နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ) ကိုကျာက်ကပ်ပျက်စီးမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဆင့် (၅)ဆင့်နဲ့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ရာဂါ အဆင့်နံပါတ်ကြီးလာလေ ကျာက်ကပ်ပျက်စီးမှုပိုများလေဖြစ်သည်။
 Stage5End Stage CKD (GFR <15 mL/min)
လူနာ၏ကျာက်ကပ်ရောဂါအခြေအနေသည် အဆင့် (၁)င့် အဆင့် (၂) တွင်ရှိနေပါက ဆရာဝန်အနေဖြင့် နာက်ဆက်တွဲပို၍ဆိုးဝါးမသွားအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျာက်ကပ်အထူးကုဆရာဝန် (သို့) အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်နှင့် သချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ ထို့ပြင် လူနာတွင်သွးချို ဆီးချို၊သွးတိုးရောဂါရှိနေပါက ထိုရောဂါများအတွက်ပါ ကုသမှုကိုကောင်းစွာ ခံယူသင့်ပါတယ်…. ကျောက်ကပ်ရောဂါအဆင့် (၃)တွင် ရှိနေပါကကျာက်ကပ်ရောဂါ၏နာက်ဆက်တွဲရောဂါတွေကတော့သွးအားနည်းရောဂါနဲ့ အရိုး ရာဂါများဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ကျောက်ကပ်ရောဂါအဆင့် (၄)တွင်ရှိနေပါက ကျာက်ကပ်ရောဂါသည်ပန်ကောင်းဖို့ အခွင့်အလမ်းအလွန်နည်းသွားပြီး အဆင့်(၅) သို့ဆက်လက်ကူးပြောင်းမည့် အနေအထားဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအနေတွင် ကျာက်ကပ်အစားထိုးခြင်းကိုပုလုပ်ပြီး ကုသမှုများခံယူနိုင်သည်။ ကျာက်ကပ်အလှူရှင်ရှာနေချိန်တွင် လိုအပ်ပါက ကျာက်ကပ်ဆေးခြင်းကို စီစဉ်ထားသင့်သည်။ ကျောက်ကပ်ရောဂါအဆင့် (၅)တွင် ကျာက်ကပ်အစားထိုးခြင်း (သို့)ကျာက်ကပ်ဆေးခြင်း (သို့) peritoneal fluid လဲပေးပြီး သန့်စင်ပေးခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားထားရပါမယ်။ ကျာက်ကပ်သည် အရမ်းပျက်စီးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအဆင့်မှာတော့ ကျန်ရှိနေတဲ့ သက်တမ်းကို ကာင်းစွာနေနိုင်ရန် (quality of life) ကျာက်ကပ်အစားထိုးကုသသင့်ပါတယ်။
မည်သူတွေက ကျာက်ကပ်လှူဒါန်းလို့ရလဲ ?
မိသားစုဝင်များမှကျာက်ကပ်လှူဒါန်းလိုလျှင် ထိုသူ၏ကျာက်ကပ်ကို လူနာထံသို့ပေး၍ ရနိုင်မရနိုင်ကို သိရှိရန် matching test တွေစစ်ဆေးပါတယ်။
အခြေခံစစ်ဆေးတဲ့ matching test တွေကတော့
အလှူရှင်ရဲ့သွေးအုပ်စုနဲ့ လူနာရဲ့သွေးအုပ်စုတူ/မတူ စစ်ဆေးခြင်း
 အလှူရှင်အနေနဲ့ သွးချိုဆီးချိုရောဂါမရှိရ၊ သွးပေါင်တက်နေခြင်း (သွေးတိုးနေခြင်း) မဖြစ်ရ။
 အလှူရှင်တွင် ကူးစက်ရောဂါများမရှိရ။
 အလှူရှင်အား လိုအပ်သည့် ဆးစစ်ချက်များအားလုံး စစ်ဆေးပြီးမှ ဆးအောင်မှ ခွဲစိတ်မှုကို ပုလုပ်ပါတယ်။
 သွေးအုပ်စုမတူတဲ့ (ABO incompatible blood group) အလှူရှင်ထံမှကျာက်ကပ်ကို အစားထိုးလို့ရပါတယ်။ အလှူရှင်နှင့် ကျာက်ကပ်လက်ခံမည့်လူနာသွးအုပ်စုမတူသောကြောင့် လူနာမှ ထိုကျောက်ကပ်ကို တိုက်ထုတ်မည့် antibody တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာ အစားထိုးကုသမှုမအောင်မြင်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကျာက်ကပ်လက်ခံမည့်လူနာတွင် ထို antibodies ပမာဏသည် သတ်မှတ်ထားသော level အောက်ရောက်မှသာလျှင်သွးအုပ်စုမတူသော အလှူရှင်ထံမှ ကျာက်ကပ်တစ်ခုအစားထိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်ယခုနောက်ပိုင်းတွင်ခတ်မှီနည်းပညာများတိုးတက်လာမှုကြောင့် ထိုပြသနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ plasma filtration နည်းဖြင့် antibodies တွေကို ဖိနှိပ်ထားပြီး သွးအုပ်စုမတူသော အလှူရှင်ထံမှ ကျာက်ကပ်ကို အစားထိုးရယူနိုင်လာပြီဖြစ်သည်။
(Deceased Donor Transplant Programme) တစုံတဦးမှ မသေမီ ကျာက်ကပ်လှူဒါန်းကြောင်းစာရင်းသွင်းလက်ခံသောဌာန ကို ဆက်သွယ်ထားပါမည်။ ထို program တွင် စာရင်းပေးထားသော လူမှသဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ program မှကျာက်ကပ်လိုအပ်နေသော သင့်ကို ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ထိုသေဆုံးသွားသောလူနာထံမှ ကျာက်ကပ်ကိုချက်ချင်းထုတ်ယူပြီး လူနာထံသို့ အလျင်အမြန် အစားထိုးကုသခြင်း ဖစ်ပါသည်။
အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသပုံကရော ဘယ်လိုမျိုးလဲ ?
Living donor ကျန်းမာသောလူထံမှကျာက်ကပ်ကို လူနာတွင် အစားထိုးပါက ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက် ဦးစွာအချိန်ညှိထားပြီး ကျာက်ကပ်အလှူရှင်ထံမှ ကျာက်ကပ်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် လူနာထံသို့အစားထိုးခြင်းကို တစ်ချိန်တည်းမှာ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ်ဖွဲ့မှ အလှူရှင်ထံမှကျာက်ကပ်ထုတ်ယူနေစဉ်နာက်ထပ်ဆရာဝန်တစ်ဖွဲ့မှ လူနာတွင် အလှူရှင်မှ ထုတ်ယူလိုက်သောကျာက်ကပ်ကို အစားထိုးဖို့ အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေမှာဖစ်ပါတယ်။ အလှူရှင်ထံမှကျာက်ကပ်ထုတ်ယူရာတွင် laparoscopy (removal of kidney by percutaneous endoscopic technique) နည်းကို အသုံးပြုပါတယ်။ Laparoscopy ဆိုတာကျာက်ကပ်နေရာနားတွင် ၀မ်းဗိုက်ကို အပေါက်ငယ်လေးဖောက်ပြီး မှန်ပြောင်း (laparoscope) ကို ထည့်ပါတယ်။ ထို့နောက် မှန်ပြောင်းမှတစ်ဆင့် ကြည့်ပြီး ကိရိယာများဖြင့် ကျာက်ကပ်ကို ဖတ်ထုတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ရိုးရိုးဗိုက်ခွဲပြီး အစားထိုးကုသမှုပြုလုပ်ပါက ရက်သတ္တပတ်များစွာ ကြာနိုင်ပါတယ်။ laproscopy နည်းအားဖြင့် အစားထိုးကုသပါက အနာပြန်ကျက်ချိန်သည် အချိန်တစ်ပတ်ခန့်သာ ကြာနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသမှုအချိန်ကတော့ ၃နာရီမှ ၄နာရီခန့် ကြာနိုင်တဲ့အတွက် ထိုအချိန်မှာ လူနာကို မ့ဆေးပေးထားပါတယ်။ အလှူရှင်ဆီမှ ထုတ်ယူလိုက်သောကျာက်ကပ်တစ်ခုကို လူနာရဲ့ မူလကျောက်ကပ်အောက်နားတွင် အစားထိုးမှာဖြစ်ပြီး ထို့နောက် ထိုကျောက်ကပ်အသစ်ရဲ့ကျာက်ကပ်သွေးလွှတ်ကြော၊ကျောက်ကပ်သွေးပြန်ကြောကို လူနာရဲ့ မှုလကျောက်ကပ်သွေးလွှတ်ကြော၊ ကျာက်ကပ်သွေးပြန်ကြောတို့ဖြင့် ပန်ဆက်မှာ ဖစ်ပါတယ်။
အလှူရှင်မှ ထုတ်ယူထားသောကျောက်ကပ်ရဲ့ ureter (ဆီးပြွန်) ကို လူနာရဲ့ bladder (ဆီးအိတ်)နှင့် ဆက်သွယ်ပေးပါတယ်။ ထိုကျောက်ကပ်မှ စတင်အလုပ်လုပ်ပါက ပုံမှန်အတိုင်းသွးများကို သန့်စင်ပေးပြီး အညစ်အကြေးများကို ဆီးအဖြစ် စွန့်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။ ရာဂါပိုးဝင်ရောက်ခြင်း (သို့)သွးဖိအားအလွန်မြင့်တက်ခြင်း မရှိပါက လူနာရဲ့မူလကျောက်ကပ်ကို ထုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အစားထိုးထားသောကျောက်ကပ်မှ ကျာက်ကပ်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ဆောင်ရန် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ခန့် ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် လူနာအနေဖြင့် မနက်အိပ်ရာထချိန်တွင်ကျာက်ကပ်နေရာမှ နာကျင်မှုခံစားရနိုင်ပါသည်။ နာကျင်ခံစားမှုများလျော့နည်းစေရန် အကောင်းဆုံးကတော့ဆးရုံမှာ အစားထိုးကုသမှုခံယူပြီးနောက် တစ်ပတ်ခန့် နာက်ဆက်တွဲ ဆးကုသမှုတွေကို ခံယူသင့်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်လှူဒါန်းတဲ့ အလှူရှင်ပေါ်မှာရော ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်လဲ ?
အလှူရှင်အနေဖြင့်လည်း laparoscope နည်းဖြင့်ကျာက်ကပ်ကို ထုတ်ယူထားခြင်းကြောင့် နာကျင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်ဆးရုံတွင် ရက်အနည်းငယ်သာနေရပီး နာကျင်မှုနည်းစေရန်အတွက် အထူးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှုရဲ့နာက်ဆက်တွဲပြသနာကတော့ အစားထိုးလိုက်သောကျောက်ကပ်ကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်မှ တိုက်ထုတ်တဲ့အခါမှာ risk of rejection ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျာက်ကပ်အစားထိုးကုသမှုခံယူပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်မှ ခုခံအားစနစ်ကို လျာ့ချပေးသောဆးများ (Anti-rejection medicine) သောက်ရပါမည်။ Cyclosporine (သို့) Tacrolimus ကို အသုံးများကြပါတယ်။ နာက်တစ်မျိုးကတော့ Mycophenolate Mofetil, Azathiprine, Rapamycinဖစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် steroid ကိုလည်းတွဲသောက်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။သာက်သုံးရမယ့်ဆးအညွှန်းတွေကို ဆရာဝန်များမှ လူနာနှင့်မိသားစုဝင်များကို သချာစွာရှင်းပြပေးမှာဖစ်ပါတယ်။ rejection risk ကာကွယ်ရန် ခုခံအား စနစ်ကို ဖိနှိပ်ထားသော ထိုဆေးပမာဏကိုသွးထဲတွင် သတ်မှတ်ထားသောပမာဏရှိ/မရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ လူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်မှ အစားထိုးလိုက်သော ကျာက်ကပ်ကို တိုက်ထုတ်ခဲ့ပါက ကျာက်ကပ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖစ်ပါတယ်။
Anti-rejection ဆေးတွေရဲ့ ဘးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကရော ?
Anti-rejection ဆေးတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ ဒီဆေးတွေဟာ ခုခံအားစနစ်ကိုလျာ့ချထားသည့်အတွက် ရာဂါပိုးမွှားများ အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ဖစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ဆိုးကျိုးတွေကတော့ သွးတွင်းအချိုဓာတ်မြင့်တက်ခြင်း (သွေးချိုဖြစ်ခြင်း)၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ မျက်လုံးရေတိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ အရိုးပွရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ပင်ပရောဂါပိုးမွှားများဝင်ရောက်လွယ်ခြင်း၊ အဖုအကျိတ်များဖြစ်လွယ်ခြင်း ခံစားရနိုင်သည်။
ကျောက်ကပ်အစားထိုးပြီးနောက် ကျာက်ကပ်က ပုံမှန်အတိုင်း ဘယ်လောက်ကြာကြာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာလဲ ?
ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့် ကျာက်ကပ်အစားထိုးကုသလိုက်ခြင်းဖြင့် သက်တမ်းအားဖြင့် ၁၀နှစ်မှ အနှစ် ၂၀ လာက်ထိ ခံပါတယ် ကမ္ဘာ စံချိန်အနေဖြင့် အစားထိုးပြီး စ် ၄၀ အထိ ကျန်းမာလျက်ရှိသော လူနာများလည်း ရှိနေပါပြီ။ အချို့သောလူနာများတွင် အစားထိုးကုသမှုမအောင်မြင်ပါက ဒုတိယအကြိမ်ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှု ထပ်မံခံယူနိုင်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်အစားထိုးခြင်းသည်ပျာက်အောင်ကုသမှုမျိုးမဟုတ်ပါ။ လူနာရဲ့ကျန်တဲ့ သက်တမ်းမှာဆးတွေဆက်သောက်ခြင်းဖြင့် ထိန်းထားရပါမယ်။ ထို့ပြင် ကျွမ်းကျင်သောဆရာဝန်ကြီးများ၊ သူနာပြုဆရာမများနှင့် ကျာက်ကပ်အစားထိုးကုသမှုခံယူထားသော လူနာများထံတွင် သိလိုသည်များကို သချာမေးမြန်းပါ။
ကျောက်ကပ် အစားထိုးခြင်း၏ အားသာချက်များ
ကျောက်ကပ်ဆေးရန်အတွက် သီးသန့်အချိန်ပေးရန် မလိုတော့ခြင်း။
အစားအသောက် အာဟာရကန့်သတ်ချက်များ လျော့နည်းသွားခြင်း။ (ဥပမာ။ ။ ကျောက်ကပ်မလဲမီ ရေကို အကန့်အသတ်ဖြင့်သောက်ရ၍ လဲပြီးပါက ပိုမိုသောက်နိုင်ခြင်း)
အစားထိုးပြီးပါက မိမိကိုယ်ကိုယ်ကို မကျန်းမာသူတစ်ယောက်အဖြစ် မမြင်တော့ခြင်း။
ကျောက်ကပ် အစားထိုးခြင်း၏ အားနည်းချက်များ
မေ့ဆေးဖြင့် အကြီးစား ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ရခြင်း။
ခွဲစိတ်ခြင်းကြောင့် အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်နိုင်ခြင်း။ (ဥပမာ ရောဂါပိုး ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်စဉ် သွေးထွက်လွန်ခြင်း)
အစားထိုးပြီး ခုခံအားချဆေးများကို အမြဲမပြတ်သောက်ရသဖြင့် အလွယ်တကူ ရောဂါပိုး ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း။/li>
ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်သော ဆေးစစ်ချက်များ ခဏခဏ ပြုလုပ်ရခြင်း
အပိုလိုဆေးရုံတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်စွဲဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော "tender loving care" နှင့်အညီ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအစားထိုးမကုသမီနှင့် ကုသပြီးနောက် ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရန် coordinator များ၊ လူနာများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သောအစားအသောက်များစီစဉ်ပေးရန် dietcians အဟာရပညာရှင်များ၊ social worker လူမှုဆက်ဆံ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ၊လ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ပြုလုပ်နိုင်ရန် ကူညီပေးမည့် Physiotherapist များမှ ထွးသော ကျန်းမာရေး စာင့်ရှောက်မှုများပေးလျက်ရှိသည်။
ဆေးကုသမည့် လူနာများအတွက် မန်မာပြည်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှ ဖ်ာပြပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
လူနာ၏ ရာဂါနှင့် ပတ်သက်သော ဆးမှတ်တမ်းများကို ဆးရုံသို့ ပို့၍ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများထံ ပသပြီး ကုသမည့်နည်းလမ်း၊ ကုသရန် ကြာမြင့်ချိန်၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျစားရိတ် နှင့် အခြားလိုအပ်သည်များကို ဆွးနွေးပေးခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိုအပ်သော ကြိုတင်ဆေးစစ်ချက်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
နိုင်ငံ ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျှာက်ထားပေးခြင်း။
လေယာဉ်ကွင်းမှ တည်းခိုရမည့်နေရာအထိ လူနာအကြိုအပို့ စီစဉ်ပေးခြင်း။
သီးခြား စကားပြန်လိုအပ်ပါက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
ဆးရုံအနီးတွင် နထိုင်နိုင်ရန် တည်းခိုးခန်း၊ ဟိုတယ် စီစဉ်ပေးခြင်း။
ဆးကုသမှုပြီးဆုံး၍ မန်မာပြည်သို့ ပန်လာပြီးနောက် လစဉ်ပုံမှန်စစ်ဆေးနေကျ ဆးစစ်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများထံသို့ ပို့ပေး၍ ညွှန်ကြားချက်များ ရယူပေးခြင်း။
ဆးကုသမှုခံယူပြီးသူများနှင့် လူနာသစ်များအတွက် ဆးရုံမှ ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ပသဆွေးနွေးနိုင်ရန် တစ်နှစ်လျှင် ၃ ကြိမ် သို့မဟုတ် ၄ ကြိမ် တွ့ဆုံပွဲများ ပုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။